Dhallinyarooy, Taariikhdu waa Dhacdo ku Dhaaftey oo leh Bilow iyo Dhamaad Xirmey – Radio Daljir
Juunyo 30, 2015 5:10 b 0
Talaado, Juun 30, 2015 (Daljir)_Dhallinyarooy, taariikhdu waa dhacdo ku dhaaftey oo leh bilow iyo dhamaad xirmey. Jaceylkeeduna wanaag kuma kordhin-karto, naceybkeeduna xumaan kuma nuqsaamin karto.Waa qoraal tilmaamaya isla-markaas fasiraya tagtada, taas oo qaab aqooneed oo aan dheelliyin kuugu tebineysa xaqiiqooyin iyo xeerar loo kaashado fahamka taaganta.Dabadeed aad kaga wacyi-qaadato qorsheynta naqshadda aad u dooneyso timaaddadaada.
Ogaalka dhabta ah ee laga helo tagtada, waxay ku siisaa abbaar-qaadasho dhab ah ee taaganta iyo odoros-wanaag dhab ah ee timaaddada.Sidaa darteed fac aanan taariikhda si sax ah ugu gudbin faca ka danbeeya, si sax ah ugama dhaadhicin karaan taaganta, timaaddadana waa uu ka khaldaa.Dhacdooyinka maalin-walba aad arkeysid ama aad maqleysid waa natiijo ay dhashay taariikh aadan ogeyn, taas oo haddaadan si sax ah u helin uu kaa lumayo fahamka waxaas kuu muuqda.
Bulshadii dooneysa in ay ka adkaato legdanka ay timaaddada kula-jirto, waxay si sax ah u barataa tagtadeeda dhankeeda ay jecelyihiin iyo dhankeeda ayan jecleyn.Qof-walba oo taariikhda been ka sheega, ilaah buu been u sheegey oo waa uu denbaabay, naftiisa ayuu been u sheegey oo luggooyo kula kacay, isla-markaas wuxuu ku been-abuurtey dad dhintey oo aanan is difaaci-karin.
Ogow oo casharka ugu hilan culus oo aanu ka faa´iideyno taariikhdayada wuxuu yahay, casharka inoo tilmaamaya in aynaan ka faa´iideysan taariikhdayada..
WQ: Sadaq Eenow .
Wasiirkii hore ee Caafimaadka Puntland